Niverina tany Budapest niaraka tamin'ny sidina London Heathrow ny British Airways
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Niverina tany Budapest niaraka tamin'ny sidina London Heathrow ny British Airways
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Hongria • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Ny fiverenan'i British Airways dia manome ny fifandraisan'ny mpandeha an'i Budapest amin'ny sidina lavitra be amin'ny alàlan'ny foibeny rehefa misokatra indray ny tsena.
British Airways dia mamerina ny sidina London-Budapest
BA dia manolotra serivisy intelo isan-kerinandro eo anelanelan'ny Budapest sy London.
British Airways hampitombo ny sidina ho an'ny ririnina ho avy.
Ny seranam-piaramanidina Budapest dia nandray ny fanombohana ny serivisy serivisy BA ho any London Heathrow. Ny rohy mamelombelona eo anelanelan'ny renivohitra roa dia miverina amin'ny tsenan'i Budapest UK anio.
Tamin'ny voalohany dia nanolotra serivisy intelo isan-kerinandro, ny mpitondra saina any UK dia efa nanamafy ny fisondrotana inefatra isan-kerinandro amin'ny tapaky ny volana septambra, fanentanana lehibe ho an'ny vanim-potoanan'ny ririnina. British Airways'Return dia manolotra ny fifandraisan'ny mpandeha an'i Budapest amin'ny sidina lavitra maro amin'ny alàlan'ny foibeny rehefa misokatra indray ny tsena.
Balázs Bogáts, Lehiben'ny fampandrosoana Airline, Seranam-piaramanidina Budapest Hoy izy: “UK no tsena lehibe indrindra any Budapest nandritra ny taona maro. Ny tena marimarina kokoa dia i Londres no mpiray tanàna lehibe indrindra tamntsika tamina volabe, ka mampientanentana antsika ny miarahaba antsika British Airways hiverina amin'ny seranam-piaramanidintsika ary mbola famantarana iray hafa momba ny fanarenana antsika ihany koa. ”
Manompo mpandeha mihoatra ny antsasaky ny tapitrisa tamin'ny volana lasa - fitomboana matanjaka 77% raha oharina tamin'ny volana jolay lasa teo - Budapest dia vavolom-pivoarana miabo miaraka amin'ny fifohazana amin'ireo zotra efa ela sy mahomby.
British Airways dia kaompaniam-pitaterana sainam-pirenen'i Fanjakana Mitambatra. Ny foibeny dia any London, England, akaikin'ny ivon-toerany lehibe ao amin'ny seranam-piaramanidina Heathrow. Ny zotram-piaramanidina no mpitatitra entana lehibe indrindra any UK, miorina amin'ny haben'ny fiaramanidina sy ny mpandeha entina, ao ambadiky ny easyJet.
London Heathrow dia seranam-piaramanidina iraisam-pirenena lehibe any London, England. Iray amin'ireo seranam-piaramanidina iraisampirenena enina manompo ny faritra London. Ny seranam-piaramanidina dia manana sy mitantana an'i Heathrow Airport Holdings.